နေရွှေသွေးအောင် နဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေကြပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဓာတ်ပုံ နှင့် တကွ ပွင့်လင်းစွာ ချပြလိုက် တယ်ဆိုတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း – Shwe Likes
နေရွှေသွေးအောင် နဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေကြပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဓာတ်ပုံ နှင့် တကွ ပွင့်လင်းစွာ ချပြလိုက် တယ်ဆိုတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း
ပရိသ တ်ကြီးရေ ဒီနေ့မှာ အရမ်းကို ထူးဆ န်းလွန်းတဲ့ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ ဆိုရှယ် မီဒီယာတွင် တက်လာပါ တယ်နော်။ ဒီပုံလေးကေ တာ့ ရေဗက္ကာဝင်း တင်ထားတဲ့ နေရွှေေ သွးအောင် နဲ့ ရိုက် ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး ဖြစ်ပါတ ယ်နော်။ အရင်လလောက်က ရေဗက္ကာဝင်း တစ်ယောက် ချစ်သူရသွားပြီလို့ ချပြခဲ့တာ မှတ်မိကြေ လာက်မယ် ထင်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ်များ က သူမရဲ့ အရင်ယောကျာ်း ကို မယ်လိုဒီမှ လုယူသွားတဲ့ အတွက် သနားကရုဏာ သက်ခဲ့ြ ကတာပါနော်။ ဒီနေ့တက် လာတဲ့ ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီး ဒီအချိန်မှာ လုပ်ရက် လွန်းတဲ့ သူမကို ပြောဆိုနြေ ကတာပါနော်။ ဒီပုံကတော့ မကြာသေးခင်က နေရွှေသွေးအောင် ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ရိုက် ထားတာပါနော်။
အခုပုံကို ရေဗ က္ကာဝင်းမှ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နေရွှေေ သွးအောင် ဘက်မှ Photo Tag တောင် မဖွင့်ပေးခဲ့တာေ ကြာင့်အားလုံးက လှောင်ေြ ပာင်နေကြတာပါနော်။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးလည်း နိုင်ငံရေးအခြေအေ နဆိုးဝါးနေချိန်မှာအ ချိန်ကိုက် စစ်တပ်ဘက်က လူနဲ့ ကြိုက်သွားတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်းကို ဘာပြောချင်ကြ ပါသေးလဲ….
ပရိသ တ္ႀကီးေရ ဒီေန႕မွာ အရမ္းကို ထူးဆ န္းလြန္းတဲ့ ဓာတ္ပုံ တစ္ပုံ ဆိုရွယ္ မီဒီယာတြင္ တက္လာပါ တယ္ေနာ္။ ဒီပုံေလးကေ တာ့ ေရဗကၠာဝင္း တင္ထားတဲ့ ေနေ႐ႊေ သြးေအာင္ နဲ႕ ရိုက္ ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေလး ျဖစ္ပါတ ယ္ေနာ္။ အရင္လေလာက္က ေရဗကၠာဝင္း တစ္ေယာက္ ခ်စ္သူရသြားၿပီလို႔ ခ်ျပခဲ့တာ မွတ္မိၾကေ လာက္မယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။
ပရိသတ္မ်ား က သူမရဲ႕ အရင္ေယာက်ာ္း ကို မယ္လိုဒီမွ လုယူသြားတဲ့ အတြက္ သနားက႐ုဏာ သက္ခဲ့ၾ ကတာပါေနာ္။ ဒီေန႕တက္ လာတဲ့ ဓာတ္ပုံကိုၾကည့္ၿပီး ဒီအခ်ိန္မွာ လုပ္ရက္ လြန္းတဲ့ သူမကို ေျပာဆိုေနၾ ကတာပါေနာ္။ ဒီပုံကေတာ့ မၾကာေသးခင္က ေနေ႐ႊေသြးေအာင္ ရဲ႕ ေမြးေန႕မွာ ရိုက္ ထားတာပါေနာ္။
အခုပုံကို ေရဗ ကၠာဝင္းမွ စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေနေ႐ႊေ သြးေအာင္ ဘက္မွ Photo Tag ေတာင္ မဖြင့္ေပးခဲ့တာေ ၾကာင့္အားလုံးက ေလွာင္ေျ ပာင္ေနၾကတာပါေနာ္။ ကဲ ပရိသတ္ႀကီးလည္း နိုင္ငံေရးအေျခအေ နဆိုးဝါးေနခ်ိန္မွာအ ခ်ိန္ကိုက္ စစ္တပ္ဘက္က လူနဲ႕ ႀကိဳက္သြားတဲ့ ေရဗကၠာဝင္းကို ဘာေျပာခ်င္ၾက ပါေသးလဲ….
အလှမယ်တစ်ယောက် ဖြစ်မလာခင်တုန်းက ရင်သားကင်ဆာ‌ကြောင့် စိတ်ညစ် ခဲ့ရဖူးတဲ့ သူဇာဝင့်လွင့် အကြောင်း
ဧပြီ ၁၇ ရက်နေ့ က ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ ဇဏ်ခီ နှင့် ခရစ္စတီးနားခီတို့ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ အကြောင်း…..
နွေဦး မှာကြွေ လွင့်ခဲ့ ရ တဲ့ ကိုချစ်မင်းသူ ရဲ့ကျန် ရစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဇနီးကို မွေးဖွားပြီးတဲ့အထိ တာဝန်ယူပေးမဲ့ နီနီခင်ဇော်